CALEEMAHA KALA DUWAN "DAREEMID" - VITICULTURE
Caleemaha kala duwan "dareemid"
Iyada oo aan loo eegin tirada noocyada canab, mid kastoo uu leeyahay shakhsiyad gaar ah.
Tani waxay sidoo kale ku saabsan dabeecadaha koritaanka geedka canabka ah, iyo diidmada cayayaanka kala duwan iyo, dabcan, sifooyinka ee fruiting.
Sababtoo ah noocyo badan oo canab ah, qof kasta ayaa dooran kara dhabta ah waxa soo jiidashada isaga.
Haddii aad raadinayso noocyo hore oo aad ku raaxeysan kartid miraha waaweyn, quruxda badan iyo dhadhan fiican leh, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad fiiro gaar ah u yeelatid "Sensation" kala duwan.
Waxaan isku dayi doonaa inaan kuu sheegno faahfaahin badan oo ku saabsan noocyada kala duwan si aad u dooneyso inaad si degdeg ah u iibsato oo aad u beerto canabkani.
Waxyaalaha kala duwan ee canab aad raadineysid: sharraxaadda "dareemada"
Si tartiib ah ku filan, laakiin kala duwanaanta noocyada caleemaha ee maanta waa dhab ahaantii abuurista hirgeliyaha caadiga ah ee V. U. Kapelyushny. Dumarku waxay isku dayeen in ay ka gudubaan noocyo ay ka mid yihiin "Talisman" iyo "Rizamat", taas oo ka dhalatay taas oo keentay "Cinjir" dareemis. Kala duwanaantan waxaa loola jeedaa oo kaliya wakhtiyada Biyaha oo hore, laakiin sidoo kale taariikhaha aad u dheer ee soo galaya ee baadiyaha sabiib ah inta lagu jiro xilliga firaaqada.
Xaaladdan, si ay u koraan canab "Sensation" waxay ku jiri kartaa xaalado jawi kala duwan, maxaa yeelay waxay leedahay tiro badan oo ah guryaha la qabsado. Iyo noocyada kala duwan waxaa loogu talagalay isticmaalka cusub, sidaas darteed taageerayaal badan waxay u koraan iibinta.
Calaamadaha farabadan oo canab ah "Sensation": kala duwanaanta iyo faa'iidooyinka
Kala duwanaantan noocaan ah waxay ku faantaa xajmiga aad u ballaaran ee roodhidooda. Miisaanka celceliska miisaankoodu wuxuu u dhexeeyaa 0.7 illaa 1.5 kiilo garaam., inkastoo ay ka fog tahay xadka ugu sareeya ee waxqabadka. Qaababka canabku waa mid soo jiidasho leh, waxaa jira laba xabbadood oo cylindrical iyo konik ah. Laakiin si gaar ah loo xasuusto canabkani wuxuu ka dhigayaa qaabka iyo midabka berry. Ka dib markii dhan, marar badan maahan in aad ka heli karto canab aad u qurux badan, oo qiyaastay 5.5 x 2.5 sentimitir.
Miisaanka canabkani waa mid dhexdhexaad ah 23-25 ​​garaam, in kasta oo tirada berry ay gaarto tiro dhan 30 grams. Bilowga Bisaylkiisa, canabkani waxay noqdaan midab huruud ah-casaan, taas oo waqtiga ba'an uu buuxsamay casaan. Sumada canabkeed "Sensation" waxay leedahay dhadhan aan caadi ahayn, oo ay la socdaan ari udgoon. Sidoo kale, saxarada waxaa ku jira xaddi weyn oo casiir ah oo daboolan, inkastoo ay adag tahay, laakiin ma dareemeynin marka dhan la cuno.
Natiijooyinkaa waxaa laga filan karaa canab "Sensation": wakhtiga uruurinta iyo xaddiga dhalmada
Sidii aan horey u soo sheegnay, kala duwanaanta canabka "Sensation" waxaa loola jeedaa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya. Ereyga xilli sii kordhaya ee duurka ku yaala waa 90 ilaa 110 maalmood, kaas oo u ogolaanaya in maalmaha ugu horeeya ee August si loo bilaabo dhadhamin iyo ururinta canab si fiican u tunta. Waxa kale oo ay u qalantaa in la ogaado in leh baadiyaha weyn iyo badi badan oo beergooyska, miraha ka dib u bislaadaan wax yar ka dib - by bartamihii August.
Sidaa darteed, haddii bisayl ka yimaado wax yar ka dib - ha degdegin in ay ka niyad-jaban ee kala duwan, sababtoo ah waxaad sugi kartaa Bisaylkiisa ee berry ah oo qurux badan muddo dheer.
Waxaa haboon in la ogaado in qiyaasta goosashada ee laga soo ururin karaa duurka ee noocyada kala duwan yihiin kuwo aad u sarreeya. Tan waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in hal baadiyaha ah lagu dhejin karo 45 ilbidhiqsi, iyo miisaan weyn oo ka mid ah farabadan baadiyaha xitaa aad u culus.
Canabku waxay ku xiran yihiin geedka canabka ah si aad u adag, oo aan luminaynin tayada iyo guryaha muddo dheer lagu keydiyo baadiyaha bilawga ah ee qaangaarka.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee ay ku leedahay canabkiisa "dareemid"
• Canabka miiska oo leh marxalado daba dheeraada hore.
• Tayada sare ee muuqaalka miraha iyo dhadhanka.
• Tirada goosashada ballaaran.
• Cinjiryada godadka ee noocyada kala duwan looma arko.
• Ubaxa wuxuu leeyahay labada jinsi, si qurux badan loo sameynaayo iyada oo aan wax caawin ah.
• Isku-habboonaanta canabka ah ee "Cinjir" si ay ufududaan, boqolkiiba kaas oo ah 80%.
• Sababtoo ah awoodda maqaarka iyo qaabdhismeedka jirka ee berry, beergooyska si wanaagsan loo qaado fogaan fog. Xaqiiqadani waxay sidoo kale gacan ka geysaneysaa muddada dheer ee kaydinta canab.
• Dalagyada si fudud ayaa u bedelaya isbeddel adag oo qoyaanka hawada ah, miro guduudku ma burburin.
• Cayayaanka beeraha canabka ah, gaar ahaan finan, ma saameynayaan.
• La hubiyey caabbinta sare ee baadiyaha iyo miraha ay ku badantahay cudurada ugu badan ee sabiib ah: xayrta maqaarka ah, caaryada cawliga ah iyo jeexdo.
• Faafinta ballaaran ee canabka "Sensation" waxay keenaysaa iska-caabbinta wanaagsan ee heerkulka hooseeya. Gaar ahaan, baadiyaha oo aan waxyeello gaarsiisaneynin yaraanta dhaxanta ee calaamad u ah -24ºS.
Waa maxay faa'iido darrada canabka "Sensation"?
Dabiici ahaan, wax-soo-saarka sare waa tayo aad u fiican. Si kastaba ha ahaatee iyada oo ay ka badan tahay wax soo saar, tayadiisu waxay si weyn u xanuunsan kartaa: xajmiga labada xabbadood ee beeraha iyo berry ayaa hoos u dhigi doona. Xaaladdan oo kale, canab xeeldheer wuxuu u baahan yahay diirada beergooyska, taas oo la fulinayo ka dib ubax.
Sidoo kale, inkastoo ay caabbinta wanaagsan ee dhaxan, baadiyaha u baahan tahay hoy u ah jiilaalka. Ka dib oo dhan, xaqiiqdu waxay tahay in heerkulka hooseeyo, qoyaan ka soo geedka canabka ah, kuwaas oo leh saameyn aad u xun on baadiyaha oo dhan. Xilliga gu'ga, canabkani wuxuu noqon karaa mid aad u xanuun badan mana awoodi doono in uu ku farxo faro badan oo miro ah.
Muxuu yahay isha gaarka ah ee canab beerto "Sensation": sharaxaad faahfaahsan ee geedi socodka
Kala duwanaanshaha caleemaha "Sensation" waa ikhtiyaarka ugu fiican ee sii kordhaya xagaaga xagaaga ama meel u dhow gurigaaga. Thanks to baadiyaha xoog leh u koraya, waxay u adeegi doontaa oo kaliya sida warshad beerta, laakiin sidoo kale noqon doonaa qurxinta gurigaaga ama arbor. Saamaynta ballaaran ee canabkani wuxuu u oggolaanayaa maaha oo kaliya in uu kordho badankiisa dalkiisa, laakiin sidoo kale inuu diyaariyo noocyo kala duwan oo ilaalin ah isaga. Su'aashu waa sida si habboon loo beero canabka this. Tani waxay si faahfaahsan ugala hadli doontaa.
Waxaan dooranaa meesha saxda ah iyo waqtiga loo beerto canab of kala duwan "dareemid"
Canab ee noocyada kala duwan ma laha shuruudo gaar ah oo ah meel ay ku koraan, si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo shuruudaha guud ee noocyada kala duwan:
• Canab jacayl oo aad u badan u baahan baahi qorrax leh. Thanks to isaga, baadiyaha si fiican u koraan, iyo midhihiisa si dhaqso ah u bislaadaan. Sidaa darteed, canab ah ma ku haboon yahay meelaha hoos u. Waxaa ugu wanaagsan in la beero dalaggan koonfurta dhinaca dhismaha..
• Waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa in marka ubax lagu beerayo lafdhabarta laga yaabo inay lumiso badi wax soo saarka beeraha haddii dhirta aan laga daboolin diyaaradaha iyo dabaylo qabow. Sababtan awgeed, waxaa fiican in laga baxo canab dhismayaasha ka dib oo noqon doona ilaalin duurka. Waxa kaliya ee aadka muhiimka u ah in la tixgeliyo waa masaafada u dhexeysa dhismaha iyo baadiyaha: waa inaysan ka yarayn 70 sentimitir.
• Waxaa la doorbidi karaa in la xusho ciidda bacriminta leh carrada iftiinka leh ee loo beerto canab. Maqnaanshaha mid ka mid ah, waxaad isku diyaarin kartaa naftaada, adoo adeegsanaya bacriminta dhowr sano oo isku xigta oo qashin ah.
• Masaafada u dhexeysa baadiyaha sidoo kale waa mid aad muhiim u ah in la tixgeliyo, maxaa yeelay waxay isku dhejin karaan midba midka kale oo aad isugu xiran. Marka la eego in canabka "Sensation" uu leeyahay qashin adag, masaafada u dhexeysa waa inay ahaataa qiyaas dhan 1 mitir.
• Waqtiga beerto ee grapevine wuxuu noqon karaa mid aad u fidsan inkastoo ay labadaba la fulin karaa labada guga iyo xilliga dayrta.. Marka ugu horeysa, beerto canab ah waxaa laga qabtaa bilowgii Abriil ilaa bilowgii June. Wax kasta waxay ku xiran yihiin nooca seedling iyo habka loo yaqaan "grafting". Xilliga dayrta, waxaa suurtogal ah in la bilaabo beerashada canab ka soo qeybta labaad ee Sebtembar iyo ku dhowaad ilaa inta uu dhaxan xilliga dayrta.
Hababka loo beerto canab: Waa maxay khilaafaadka iyo faa'iidooyinka mid kasta oo iyaga ka mid ah?
Canbaarta faraha badan ee "dareemada" waxay noqon kartaa siyaabo badan:
• Gooynta gooynta ah ee kaydka geedka canabka ah.
• Geedo geedo ah oo xididdadiisa u gooni ah.
• Geli tubooyinka.
Waxaa cad in ay dhacdo in aad beerto canab ah markii ugu horeysay, ka dibna xulashada kaliya waa in la beero iyadoo la kaashanayo seedling ah. Xaaladdan, wax khatar ah ma arkeysid inaad aragto sifooyin ama cuduro ku jira baadiyaha cusub kaas oo saamiyada duqoobay. Waxaa intaa dheer, heerka aasaasiga ah ee seedling waa ku dhowaad 100%, tan iyo horeba at beerto waxa uu leeyahay xididada, kuwaas oo si dhakhso ah u la qabsadaan musqulaha ciidda cusub.
Dabcan, faa'iidada weyn ee miro-dhalinta noocyada canabka ah ka dib markii ay ka saareen baadiyaha hore waa in kiiskan baadiyaha yar yar si dhakhso ah u leeyihiin nidaam xidid si fiican u horumarsan. Laakiin gooynta gooyn on stock ma aha had iyo jeer dhacdo tayada. Waxay dhacdaa in gooynku qallajiyo suufka, inkasta oo cawaaqibyadaas laga hortagi karo oo aan ka sheegi doono hoos ku qoran.
By musqulaha, canab "Sensation" canabkaaga ku dhufo haddii aad leedahay nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee this. Markaas ka mid ah biqil aad u wanaagsan oo muddo dheer loo doorto on, waxaa lagu cadaadiyay ciidda iyo buuxsamayaa aad u adag. Muddo ka dib, biqil aad u hesho xidid iyo Gagaab sida geed geed buuxa ah. Kadibna waxaa suurtogal ah in la gooyo baqashada oo la xiriirta baadiyaha waalidka isla markaana u beddesho meel cusub.
Hababka beeritaanka canab "Dareen": heerarka shaqada
First of dhan, xitaa ka hor inta iibinta sapling ah, waxaa haboon si loo diyaariyo god ee for beerto.
Tiro badan oo Bacriminta kala duwan waa in la dhigo godadka, lakabka kaas oo si fiican u boogo ka hor seedling laftiisa la beeray.
Sidaas darteed, diyaarinta ceelka for beerto dayrta waa in lagu fuliyaa qiyaastii 2-3 toddobaad, iyo beerto guga - xitaa dayrta. Laakiin bacriminta laftiisa waxay noqon doontaa ilaha nafaqooyinka loogu talagalay dhalinyarada yar yar, taas oo sanadaha hore ee koritaanka iyada oo aan joogitaanka nidaam xidid oo horumarsan, "saaro". Ceelku waa in loo diyaariyaa sida soo socota:
• Moolka qulqulka waa inuu ahaadaa ugu yaraan 0,8 mitir oo leh ballac habboon.
• Qeybta hoose, marka hore, qiyaastii 5 cm ee lakabka ah ayaa lagu shubay.
• 10 sentimitir oo ciid ah oo bacrin ah ayaa lagu shubay burburka, iyo dusha sare ee lakabka - qiyaastii 2 baaldiyo ee humus.
• Ku buuxi lakabka kale ee bacrin ah oo si fiican u jilciya bacriminimadayada.
• Marka lagu daro humus, Bacriminta macdanta ayaa lagu dari karaa godka: potassium iyo phosphates.
• Si looga hortago nidaamka xididka ah in uu waxyeeleeyo bacrimin badan, waxay u baahan yihiin in la buuxiyo lakabka kale ee carrada.
Dheeraad ah waxaan sugnaa hoos u dhigista ciidda waxaanan diyaarinaynaa sapling. Talaabada koowaad waa in la baaro nidaamka asaasiga ah iyo u dir biyaha ilaa dhawr maalmood. Haddii aad soo iibsatay seedling cagaaran ee galaas, waxaa lagu wadaagi karaa ciidda kaas oo lagu beeray. Waxa kaliya ee u baahan doona si aad u fiican oo qoyan.
Tan oo dhan ka dib, waxaan dhigo seedling ee daloolka ah iyo si taxadar leh u aaseen. Waxay macquul tahay xitaa dhexdhexaadinta geedi socodkan si aad ugu shubto baaldi biyo ah ceelka, kaas oo xajin doona ciidda mana ka tagi doono daloolka hawada. Waxaa muhiim ah in qoorta asalka ah ee kiis jirin weli hoos lakabka dhulka. Dhowrka safka, dhinaca woqooyi, taageero adag ayaa lagu qodayaa.
Xeerarka isdhaafka "Raajo" si ay u noqoto mid kale oo baadiyaha ah
Wixii canab lagu xoqay wuxuu u baahan yahay inuu doorto walxo tayo sare leh. Tani waxay ka hadlaysaa jarista iyo kaydka labadaba. Jidhka waa inuu noqdaa mid cusub ama si wanaagsan loo ilaaliyo tan iyo dayrta. Aad ayey muhiim u tahay in uu lahaado 2-3 indho iyo jarjar cagaaran. Sababtoo ah xasilloonida iyo sii waarida, waxaa lagu daboolay paraffin.
Sababtoo ah tan, illaa xilliga ay jirriddu qaadato xidid, ma waayi doonto qoyaanka. Qaybta hoose ee jarista waa in la gooyaa maro si ay u abuurto mid u dhow xidhiidhka kaydka ee suurtogalka ah. Sidoo kale, qaybta la jarjaray ayaa la dhigayaa kahor intaan la qiyaasi karin maalin biyo ah. Waxay ka caawisaa daaweynta gooynta kicinaysa sameynta xalalka xalalka ("Humate").
Diyaarinta kaydka waxay ka kooban tahay ka saarista baadiyaha hore iyo nadiifinta meel laga jaray. Dusha sare ee dusha sare waa inuu noqdo mid si fiican u nadiif ah oo nadiif ah. Taas ka dib, waa kala googo baddan oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah, kaas oo jarista la dhigayo. Goobta tallaalka waxaa si adag loo xiraa suunka ama dharka maro. Sidoo kale, isticmaalka dhoobada, kaas oo la daboolay goobta loo yaqaan "grafting site", ayaa gacan ka geysata in la gooyo jarida.
Dhamaadka shaqadan, saamiyada si taxaddar leh ayaa loo waraabiyaa. Ciidda ku xeeran waxay u baahan tahay in la mulched. Si aad udajiso xayawaanka waxaa sidoo kale loo baahan yahay taageero, kaas oo la dhisay inta lagu guda jiro beerashada.
Maxay yihiin xeerarka ilaalinta canab "Sensation" oo aad u baahan tahay inaad ogaato?
First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in canab ah aad u jeclaan lahaa waraabinta. Waxay u baahan yihiin koritaanka wanaagsan ee baadiyaha iyo abuuritaanka dalag fiican. Sidaa darteed, inta lagu jiro ubaxyada indhaha on geedka canabka ah, ka hor inta ubax iyo inta lagu jiro formation digir on rucubo, baadiyaha waa in la waraabiyo. Inta lagu jiro xilliyada abaarta, sidoo kale ha ilaawin canab. Sidoo kale, ka dib markii mid kasta oo waraabinta geedka canabka ah waa mulched: agagaarka jir waa la dhigaa 3 cm daaha dhadday ama dhogorta (inta badan loo isticmaalo humus ama compost). Mulch waa qayb ka mid ah quudinta canab, inkastoo aysan ku habbooneyn in ay ku xaddidan tahay, gaar ahaan carrada aan sifudud lahayn. Xaqiiji, ugu yaraan hal mar sanadkii, waxaad u baahan tahay inaad sameysid humus hoosteeda qashinka ciidda. Sidoo kale, canab si aad u wanaagsan si ay bacarimiso leh Bacriminta fosfate-potassium.
Si loo hagaajiyo dhalidda, duurka ee dhammaan noocyada sabiib ah waxaa lagula talinayaa in si joogto ah loo xiro. Qalabka xoogga leh "Sensation" waxaa lagu gooyaa illaa 6-8 indhood, inkastoo canabkiisa tayada iyo cabbirka qumman ee la heli karo ayadoo la jarayo 2-3 ilag oo kaliya. Qaab dhismeedka doorbiday qaabka duurka - fan.
Xididaadda duurka ee jiilaalka ma aha oo kaliya lagama maarmaan, laakiin sidoo kale lagama maarmaan in la sameeyo sax. Dhalinyarada oo aan weyneyn duurka qoyan waxaa ka buuxsamay ciid. Si looga hortaggo waxyeellada, waxaad isticmaali kartaa weel weyn oo aan lahayn hoos, kaas oo lagu rakibay kor u kicinta ama jarida. Dheeraad ah, naqshadahan waxaa si buuxda loogu daboolay ciid. Buurtan oo kale waa inay ahaataa 10 sentimitir ka sarraysa kan sare ee dharka. Waxaad xoojin kartaa kuraasta ama laanta. Daaqadaha waaweyn waxay ku dhuubaan wadiiqooyinka laga abuuray filimka.
Inkasta oo ay ka soo horjeedaan caabbinta caanaha "dareemada" cudurro kala duwan, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo buufinta ka hortagga ah. Waqtiga ugu wanaagsan ee arrintani waxay la jaanqaadaysaa wakhtiga biyo waraabinta canabka ah. Wixii buufinta isticmaali daawooyinka dhirta.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo daryeelka daryeelka dayrta ee canab.